China TNCF4-series 3IN INC Servo Feeder Machine ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Daya
1. Inwetaghachi ukpụhọde adopts electronic digital ngosi mita ọgụgụ;
2. High nkenke ịghasa na-chụpụrụ site mma na-adịghị mma ụzọ abụọ handwheel ịchịkwa obosara ukpụhọde;
3. The elu nke udia akara gbanwee site moto chụpụrụ mbuli;
4. A ụzọ nke oghere ala igbochi ngwaọrụ eji maka ihe mpempe akwụkwọ;
5. edingnụrụ ala na mgbazi ala na-mere nke elu alloy agba ígwè (ike chromium plating ọgwụgwọ);
6. Hydraulic ịpị ogwe aka ngwaọrụ;
7. The gia moto draịva nri isi ngwaọrụ nke ịpị wheel;
8. Hydraulic akpaka nri isi ngwaọrụ;
9. Ngwaọrụ na-akwado hydraulic;
10. Usoro nri na-achịkwa usoro Mitsubishi PLC;
11. Nkọwa nke nri na-achịkwa Yaskawa servo moto na oke nkenke mbara igwe na-ewepụta ihe;
N'ihi mmepe na-aga n'ihu nke teknụzụ, akụrụngwa na ọkpọ ọkpọ ngwa ngwa ka eji eme ihe. Ngwa nke akụrụngwa ntụmadị nwere ike melite nrụpụta arụmọrụ ma belata ọnụego ọrụ, yabụ ndị na-emepụta ihe masịrị ya. Ngwa akụrụngwa nke ọkpọ nwere nkewa feeder, ogbe ihe, igwe na-agbazi, abụọ n'otu igwe na-agbazi, atọ na otu ihe nkwụnye mgbazi ihe. Taa, anyị ga-ewebata nkenke atọ n'ime usoro nri.
1 Chekwaa ohere
The zọ mmepụta akara na-agụnye ihe ogbe, inwetaghachi igwe na nri igwe. Ọ bụrụ na igwe atọ a nwere onwe ha, olu igwe ọ bụla abụghị obere. Ọzọkwa, iji hụ na mmepụta nke ọma, a ga-enwerịrị ebe ichere ihe dị n'etiti igwe na igwe. Ya mere, enwere ike iche n'echiche ala nke usoro mmepụta. N'ozuzu, enwere obere ohere mgbe ejiri wired ahụ rụọ ọrụ, nke na-eme ka ọ ghara iru ala maka ndị ọrụ na-eje ije Uru. The atọ na otu feeder integrates atọ igwe n'ime otu. The fuselage bụ kọmpat, na ala ebe belata ihe karịrị ọkara tụnyere ọdịnala iche iche onwe ha zọ mmepụta akara, nke mere na ogbako ohere zuru ezu tinye n'ọrụ, na ndị ọrụ nwekwara zuru ezu ọrụ ohere, nke na-agaghị eme ka ọrụ erughị ala, na jirichaa nchekwa nke stampụ mmepụta.
2 Sachekwa ike mmadụ na ike ọrụ dị elu
Atọ n'ime otu feeder naanị chọrọ otu onye iji mezue nri, nri, ịbịaru, nbipu, nnwale ebu na arụmọrụ ndị ọzọ, na oge ejiri abụghị nnukwu. Otú ọ dị, ụdị ọdịnala dị iche na nke onwe ha chọrọ ka setịpụrụ nke ọ bụla nwee ike ịkwado ya na otu onye, ​​na mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa iji nyere ibe ha aka iji mezue ọrụ ahụ, nke na-adịghị mma maka ịchekwa ndị mmadụ na imeziwanye ike ọrụ.
3 Ọrụ dị mfe na oke nkenke
The atọ na otu feeder adopts na kọmputa akara usoro. Ọrụ a na-etinye uche na njikwa na njikwa njikwa. Otu onye nwere ike ịmechaa ọrụ ahụ, nke a na-eme nke ọma. Atọ n'ime otu feeder nwere ike ịtọ ogologo nri na-enweghị mgbagha, mee ka njedebe ihu nke eriri ahụ dị mfe iji kwado data ịbanye na igwe, na moto ahụ na-ebugharị akụrụngwa ogwe aka iji gbochie eriri igwe ahụ ịtọpụ. Igwe na-edozi ahihia na igwe nri di n'otu ebe ahu, enweghi oge di n'etiti ntọala, nke na eme ka mmeko nke oru ha mezie. O nwere ike belata njehie nke nri na imezi, ma rute arịrịọ nke oke nkenke, nke dị mma ma kwụsie ike.
4 Akwa ogo ebumnuche na itinye n'ọrụ
The atọ na otu feeder nwere kọmpat Ọdịdị, nke adaba n'ihi na elu ụzọ mmepụta atụmatụ na imekọ ihe ọnụ. Site na nbudata, na-emeghe ka ịchọta ya na nri, usoro nhazi ga-agwụ na nkeji ole na ole site n'aka otu onye. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma na-arụsi ọrụ ike. Okwesiri maka stamping na-aga n'ihu nke ígwè dị iche iche, stampụ, eletrọniki, ngwa eletriki, ihe egwuregwu na akụkụ akpaaka.
5 Obere ọdịda na ogologo ndụ
Atọ na otu feeder nwere obere ọdịda ọnụego na ogologo ọrụ ndụ
Nke gara aga: TNCF3-usoro 3IN INC Servo feeder Machine
Osote: TNCF5-usoro 3IN INC Servo feeder Machine
TNCF5-usoro 3IN INC Servo feeder Machine
JNCF-usoro-3IN 1NC Servo feeder Machine
TNCF6-usoro 3IN INC Servo feeder Machine
TNCF7-usoro 3IN INC Servo feeder Machine